Expressing Myself: बिम्ब बयान
हुन त पोखरेली कवि निष्प्रभ सजीको भर्खरै प्रकाशित कवितासंग्रह ‘इजलासमा लाहुरे फूल’ मा सरुभक्तले भूमिकामार्फत् ‘कविता छन्द वा छन्दहीनतामा, गद्य वा पद्यमा, बौद्धिकता वा भावुकतामा, बिम्ब वा बिम्बहीनतामा हुँदैन । कविता कवितामा हुन्छ । कविता हुन कुनै आग्रह, पूर्वाग्रह र अज्ञानताको थाक्रो चाहिँदैन ’ भनेका छन् ।
तर बिम्ब फुलेको कविताको मीठास अर्कै हुन्छ । बिम्बसँग राम्ररी खेल्न सक्ने खुबि भएकाहरू राम्रा कविका रूपमा द¥हीन सक्छन् । निष्प्रभ सजी यो गुण भएका राम्रा युवा कविका रूपमा प्रस्तुत भएका हुन् उनको उच्च बिम्बात्मक कविता कृति ‘इजलासमा लाहुरे फूल’ मार्फत् । ‘भूपरिवेष्ठित खुट्टाहरू’ पछि प्रकाशित यिनै स्रस्टाको दोस्रो कविता कृति हो यो ।
सरल भाषा, ओजपूर्ण भावना अनि सही बिम्ब तथा प्रतिमा चयनकासाथ लेखिएका यो पुस्तकका कवितामा प्रेमिल तरंग, देशप्रेम, युद्धको विभिषिका, विदेशिनुको पिडाहरू विषयवस्तुका रूपमा आएका छन् । सबैभन्दा धेरै देशप्रेमका भावना छन् । कतै–कतै कवि आप्mनो मष्तिष्कको दासताहरूबाट मुक्त हुन आप्mनै कविताको मलामी पनि हिँडिरहेका छन् !
तीर्थ श्रेष्ठको बहुचर्चित कविता ‘लाहुरे फूल तिम्रो नाम फेर्न चाहन्छु’ को प्रतिलेखन भनिएको ‘तीर्थ दाई, लाहुरे फूलको नाम फेरिएन !’ एउटा ओजपूर्ण कविता हो । विदेशमा हाम्रा लाहुरेहरू भकाभक मारिएर ढलेका वा गुमनाम भैरहेका बेला हाम्रो आगँनमा निर्लज्ज हाँसीरहेको लाहुरे फूलमाथि तीर्थ श्रेष्ठले जस्तै निष्प्रभले पनि धारिलो हात देखाएका छन् ः
“...खाली सिउँदोलाई किन लोभ्याउँछन्
निर्दयी लाहुरे फूलहरू
खाली चुल्ठोलाई किन सजाउँछन्
पर्खाल अग्लो बनाउँछन्
बसाइ सरे सुन्तलीका तृष्णाहरू
अस्ताइसक्यो बा आमाले ताप्ने घाम
र पनि एक्लो आँगनमा
निर्लज्ज सपना फुलाइरहन्छ लाहुरे फूल !
त्यसैले होला तीर्थ दाई !
लाहुरे फूलको नाम फेरिएन !” ( तीर्थ दाई, लाहुरे फूलको नाम फेरिएन ! बाट)
आमाको बिम्ब अत्यधिक प्रयोग गरिनु कवि ह्दयमा प्रस्फुटीत देशप्रेम हो । पुस्तकको भूमिकामार्फत् ‘मेरो समयको स्तब्धता नै मेरो लागि कविता हो’ भनेका कवि निष्प्रभले स्तब्ध देशबारे कोरेका कविता वास्तवमै सुललित छन् । यसैगरी कविले बाँदरमुडे घटना घटाउने ‘कायर मानिसहरूलाई’ व्यर्थका निर्जीव प्रश्न सोध्नुको औचित्य देख्दैनन् । बरु ती प्रश्नका पोकाहरू बाँदरमुडेमा गाडिएका बच्चाका अवशेषहरूसामु राख्न चाहन्छन् उनी ! बिना कसुर राजनीतिको आगोमा होमिएका निष्पृह जनताको आवाज बनेको कविता हो यो ।
कुनै कुनै कविता यस्तो विषाक्त मीठाससहित टुंगिएका छन् कि त्यसको अन्तिम शब्द पढिसक्दा पाठक केहीबेर टोलाउन सक्छ । जस्तै ः
माझी दाइको बल्छीमा
माछा होइन ! सर्प प¥यो
माझी दाई खुसी छन्
जालमा पर्न थालेका छन्
माझी दाई दुखी छन्
घरमा पर्खिरहेका होलान्
माछा बोक्ने टोकरीमा
सर्प बोकेर घर कसरी जानू ?” –(माझी र सर्पहरूबाट)
यस्तै अर्को कविता ः
“...तिमीले ढलाऊ भन्यौ
मैले ढलाई दिएँ
ढलेको मेरै ‘भाइ’ रहेछ !
तिमीले जलाऊ भन्यौ
मैले जलाई दिएँ
जलेको मेरै ‘देश’ रहेछ !” –( देश÷आदेशबाट)
देश चलाउन आफैँमा लुछालुछ गरिरहेकाहरूलाई देखेर फुच्चे भुन्टेले आप्mनो बालाई ‘बा ! तिनीहरू किन तिमीलाई पसल खोल्न दिन्नन् ?’ भनि सोधेको छ कवितामा । भुन्टेको प्रश्नमा बाबु चुपचाप रहन्छन् । यो बाबुआमाको पिडा हो ।
समीक्षक हरि अधिकारीले ‘राम्रो कविता कसरी बन्न सक्छ ठ्याक्क भन्न गा¥हो छ’ भनेजस्तै कविताको राम्रो पनको यकिन गर्न सकिँदैन । तरपनि एउटासँग अर्कोको तुलना गर्नु पनि कुनै कुराको कसि जाँच्न सकिने माध्यम भने हुन सक्छ है ! ‘क्यालेन्डर जिन्दगी’, भित्ताका प्रश्नहरू’, ‘घाम’, जस्ता कविताहरू ‘इजलासमा लाहुरे फूल’, ‘तीर्थ दाई लाहुरे फूलको नाम फेरिएन !’, ‘सिमानामा देश’, ‘म, आमा र कुकुरहरू’को तुलनामा सा¥है नै मध्यम स्तरका र फितला लाग्छन् ।
पुस्तकको शिर्ष कविता ‘इजलासमा लाहुरे फूल’मा फूलहरूलाई कडा घोचपेच गरिएको छ । बेमौसम फुलेको लालुपातेलाई कविले ‘जैरे’ भनिदिन्छन्, चैत नलाग्दै उडेर गएको सिमल फूललाई कविले घृणा गर्छन् । रातो फुल्ने लाहुरे फूल कुनै मौसममा सेतो फुल्छ ! फूललाई इजलासमा उभ्याइन्छ । तर पनि सेतो फुलेर पाप गरेको त्यो लाहुरे फूल निर्धक्क हाँस्दा पनि हाम्रा ‘सानुमाया’हरूले मुस्कुराएरै त्यसलाई सिउरिरहन रुचाएको यथार्थप्रति कविको कडा व्यङ्ग्य भाव छ ।
हामीले पढ्दै आएका धेरै कविताहरूमा जूनलाई प्रेमिकाको दर्जा दिइ एउटा प्रतिकात्मक प्रयोग गरिने चलन छ । तर यो भावलाई डिकन्सट्रक्ट गर्दै ‘दाग आमा र जून’ मा जूनलाई आमाको प्रतिक मानीएको छ । जसमा आप्mना सन्तानहरूको अँध्यारो छिचोलिदिन आमाले आफैँमा दाग लगाउन पनि नडराएको कुरा अभिव्यक्त छ । यसरी प्रयोग भएका धेरैजसो बिम्ब र प्रतिकहरूको अर्थलाई डिकन्स्ट्रक्ट गरीएको छ । कविताका पंक्तिहरूमा आउने सर्प, भ्गागुता, लाटोकोशेराका बिम्बहरू फरक अर्थ बोकेर उभिएका छन् । लाटोकोसेराका उराठीला गीतहरूले कविताका पात्रलाई आनन्दित बनाउँछन् !
एउटा गतीमा बगीरहेको कुनै–कुनै कविता अन्तिम हरफतिर आउँदा कविता नभएर गीत जस्तो सुनिँदा पाठकहरू खिन्न हुन सक्छन् । त्यस्तो समान ढंगको कवितात्मक लय र भावबाट अन्तै मोडिनु कविको एउटा असफलता भने पक्कै हो । यसैगरी कवितामा बिम्बहरूका यस्ता डंगुर छन् कि पाठकहरू कुनै–कुनै बेला अलमलिन्छन् । प्रयोग गरिएको बिम्बले नकारात्मक अर्थ राखेका हुन् वा सकारात्मक भाव, खुट्याउनै नसकेर ।
समग्रमा, बिम्ब बयान भएर पुस्तकमा उभिएका कविताहरू खुबै दमदार छन्, मीठा छन् । नयाँ प्रयोग खोज्नेका लागि पनि यी कवितामा बिम्बको सहज, नौलो र लोभलाग्दो प्रयोग भएका हुनाले त्यस्ता पाठकका लागि पनि पुस्तक निकै फलदायी हुन सक्छ ।
लेखकः निष्प्रभ सजी
प्रकाशकः नेपलिज एसोसिएसन अफ क्विन्सल्यान्ड, अस्ट्रेलिया
बितरकः साझा प्रकाशन
Posted by CP Aryal (सिपी अर्याल) at 10:36 PM